Yakakwira Frequency Induction Preheat Yezvekutsikisa Nzvimbo
musha / Applications / Induction Preheating / Yakakwira Frequency Induction Preheat Yekuchaya Zvikamu
Categories: Applications, Induction Preheating Tags: yakakwirira frequency preheating tambo, induction preheat yekukuvara, induction preheating, induction preheating machine, induction preheating process, preheat yekukuvara, preheat micheka, kupisa
Mutengi anopisa zvikamu zvakasiyana-siyana kuitira kuti vagone kudhonzwa. Chinangwa chemuyedzo uyu kufemera preseat chimwe nechimwe kusvika pa600 ° F (316 ° C) mumasekondi makumi matatu.
DW-HF-15kw induction yekudziya muchina
induction heat heat machine HF-15
Zvikamu zvemuenzaniso zvakapihwa nemutengi. Izvi zvinosanganisira:
• Chikamu 1 chakaumbwa nemagineti simbi ine 0.375 ”(9.525mm) OD
• Chikamu chekutanga chakaumbwa nesimbi yemagetsi ine 2 ”(0.5mm) OD
• Chikamu 3 chakaumbwa nemagineti simbi ine 0.875 ”(22.225mm) OD
• Chikamu chekutanga chakaumbwa nesimbi yemagetsi ine 4 ”(1.5mm) OD
• Makoiri maviri akashandiswa. Coil 1 yekupisa chikamu chechina neiyo 4 ”(1.5mm) OD. Dzimwe dzese zvikamu dzaidziirwa necoil 38.1.
Tembiricha: dzinosvika 600 ° F (316 ° C)
• Chikamu 1: 1.68 kW
• Chikamu 2: 2.6 kW
• Chikamu 3: 4.74 kW
• Chikamu 4: 3.79 Kw
Nguva: zvisingasviki makumi matatu
Chikamu chacho chakange chakatenderedzwa mune coil.
Iyo DW-HF-15kw Induction Kupisa Magetsi Yekushandisirwa magetsi yakashandurwa.
Tembiricha yaitariswa ne infrared kamera uye neTempilaq pendi.
Zvikamu zvese zvaikwanisa kuongororwa zvichishandisa zvigadziriso zvakafanana. Hapana shanduko yaidikanwa pakati pemagetsi ekupisa, kunze kwekutsvaira kunze kweiyo Chikamu 4. Izvi zvinokonzerwa neDW-HF-15kw Induction Heating Power Technologies 'dhizaini inobvumidza iyo inopinza sisitimu yekudziya kusvika kune dzakasiyana-siyana mitoro.
Simba pane chinodikanwa nekukurumidza kupisa mitsetse
Kudzokorora kuita, kwete kweanoshanda kana zvikamu zvaiswa mudendere kana kuumbwa
brazing mhangura mapuranga akafukidza joints